Sababii koronaavaayirasiin jeettiin dhuunfaa baay'inaan barbaadamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Sababii koronaavaayirasiin jeettiin dhuunfaa baay'inaan barbaadamaa jira
Dhaabbileen jeettii dhuunfaa kireessan sababii koronaavaayirasiitiin wal qabatee lakkoofsi namoota dhuunfaan xiyyaara kireeffachuuf gaafatanii dabaluu himan.
Sababii balaliinsi Chaayinaa keessaa bahuufi galuu dhaabbateen imaltoonni muraasni biyyattii keessa akka turan taasifamaniiru.
Gatiin isaa jabaa ta'ulleen soorayyiin ammoo dhunfaadhaan jettii kireeffatanii balalii'uuf gaafataa jiru.
Haa ta'u malee dhaabbilee jeetti dhiyeessan ammoo gaaffii dhiyaataa jiru sababii dhorkaa imalaafi hirna xiyyaaraa akkasumas hojjattootaan guutuu hindandeenye.
Dhaabbanni Daladla Jeettiiwwani kan bu'urasaa biyya Awustiraaliyaa taasifate tokko akka himeetti gaaffiin dhiyaataa jiru baayyee ta'ulleen hanqina xiyyaaraafi hojjattootaan kan ka'e baayyeessaa kessummeessu hindandeenye.
''Baayyeen xiyyaaraa fi hojjattoota isaanii gara Chaayinaatti ergu hinbarbaadan. Soodaa nageenya hojjattootaa akkuma jiruutti ta'ee, erga Chaayinaa galanii booda torbaan lamaaf qofaa turuu waan qabaataniif hojii omaa waan hinhojjanneef erguu diduu.''
'Balaliinsa addaan kutuun ulaagaa kamiinuu fudhatama hin qabu'
Dhaabbanni Jeettii Singaapooriitti bu'ureeffate tokkoos akka jedheetti, baatii darbee keessaa fedheen parsantaa 80-90 dabaleera.
''Namoonni baayyeen waggaa haaraa Chaayinaatiif kan bahan yoo ta'u, ammoo garuu deebii'uuf rakkataa jiru. Baayyeenis gara Beejiingi, Shangaa'iifi Hongi Koongiitti deebii'uu barbaadu,'' jedheera Hojii gaggeessaan Jettii Ashiyaa Longaan Raavishkaansaar.
''Nuti garuu eessa essatti balali'uu akka qabnurratti baayyee daangeeffamne jirra. Maalaqni gaafatan akkuma jiruutti ta'ee daandiiwwan qilleensaa xiyyaarota saanii akka kireeffanuuf nuuf hin hayyaman,'' jedheera.
Imaltoonni kuun ammoo Chaayinaa keessaa bahuuf barbaadu. Maamilli motummaa tokko Ameerikaa Kibbaa irraa jeettii dhunfaatiin balalii'uuf gaafateera. Kanaanis '' imaltoota dhibbaan lakka'amaniif Wuhaan irraa balaliinsa sa'aatii afurii akka kennamuuf gaafatan,'' jedha.
Dhaabbanni UK'tti bu;ureeffate tokko akka jedheettis, namoota dhuunfaafi imaltoota garee irraa gaaffii hedduun dhiyaateefiira.
Jeettii xiqqoonni namoota lamaa hanga afurii baattuu sa'aatiidhaan hanga doolaara 2,400 akka gaafatu dhaabbanni jeettii Daldala Paramount jedhmu beeksise. Jettii guddaan ammoo namoota sadeeti hanga 10 kan qabatu yoo ta'u, sa'aatiin dolaara 6,000 kanfalchiisa.
Daandii xiyyaaraa Itoophiyaa: 'Balaliinsa addaan kutuun ulaagaa kamiinuu fudhatama hin qabu'
Balaliinsa gara Chaayinaatti taasisu akka dhaabuu dhiibbaan irratti godhamaa kan ture Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa waan gaafatame raawwachuun sirrii akka hin taane beeksise.
9 Guraandhala 2020
Neetaanyaahuun mootummaa haaraadhaan aangoosaanii dhabuuf